mercredi, 07 novembre 2018 18:21
Morondava - Fokontany Anosykely
Mitarika lavitra 13
mercredi, 07 novembre 2018 18:16
Mitarika ny 13
mercredi, 07 novembre 2018 18:13
Hafa kely: Fifidianantsoa no nataony anaran-janany
Tranga hafa kely no nisy tao amin’ny Fokontany Analankininina Hopitaly Be ny marainan’ity alarobia 7 novambra ity izay sady
Teraka ny maraimben’ny androm-pifidianana filoham-pirenena ilay zazavavy kely ka nosaloran’ny ray aman-dreniny
anarana hoe : Fifidianantsoa.
Toamasina: Hatramin'ny sefo Fokontany tsy nahazo kara-pifidianana
Tranga tsy dia fahita sy tsy fandre nandritra ny fifidianana nifanesy teto Madagasikara ny hoe : sefo Fokontany tsy nahazo kara-pifidianana.
Tamin’ity fifidianana fioham-pirenena indray mitoraka ity, dia nisy io tranga io tao amin’ny Fokontany Ankirihiry-Avaratra Parcelle 11/58.
mercredi, 07 novembre 2018 18:01
Manakara ville: Manomboka ny fanisam-bato
Mitarika lavitra ny 13
mercredi, 07 novembre 2018 16:42
Kolontsaina: Nodimandry i Roland Raparivo
Teo amin'ny faha-84 taonany, teraka ny 22 febroary 1934, i Roland Raparivo no izao nodimandry izao.
Andrarezina amin'ny sary hosodoko izy. Tsy teto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina any ny lazany.
Nisy ny fampirantiana nanamarihana ny 60 taona nanaovany hosodoko notanterahina tao amin'ny Alliance Française d'Andavamamba-Antananarivo tamin'ny volana aogositra 2017.
Nakarina amin'ny laharam-boninahitra Grand Officier de l'Ordre National Malagasy izy tamin'io ho fankasitrahana ny asa vitany tamin'ny fampiroboroboana ny kolontsaina Malagasy.
mercredi, 07 novembre 2018 16:12
Bevonotra-Sambava: Lesoka ny lisi-pifidianana
Nitabataba ary nitaraina ny Ben'ny Tanàna androany raha iny handeha hifidy iny kanjo tsy voasoratra tao anaty lisi-pifidianana ny anarany.
Sambava: Mizotra ampilaminana ny fifidianana
Nisy ihany ny lesoka madinidinika toy ny tao amin’ny Fokontany Antaimby, izay efa tamin’ny 7ora35mn vao nisokatra ny fifidianana noho ny antony fahataran'ny fitaovana sy ny fikarakarana amin’ny ankapobeny.
Tsy vitsy ihany koa ny niverina, tsy afaka nifidy intsony, satria nahazo kara-pifidianana nefa ny efitrano voasoratra eo amin’ny karatra dia tsy mifanandrify amin’izany, ka lasa nahasorena azy ireo ny fivezivezena etsy sy eroa, teo ihany koa ireo mpifidy niezaka tonga aloha saingy noho ny fahataran'ny fisokafan'ny biraom-pifidianana dia lasa.
Mbola maro ireo izay tsy mahalala ny fampiasana ny bileta tokana ka eto vao mampianatra azy ireo ny tompon’andraikitra amin’ny birao fandatsaham-bato izany.
mercredi, 07 novembre 2018 15:25
Mahajanga I: Saika tara fanombohana avokoa ny fandatsaham-bato
Nisy mihitsy ireo tara fanombohana hatramin'ny 45 minitra, izany hoe tamin'ny 7 ora latsaka fahefany vao niroso tamin'ny fifidianana, toy ny teny amin'ny Fokontany Tsararano Ambany, nanana ivon-toeram-pifidianana teny amin'ny École privée Alice Valide.
Tara be ny fanateran'ny CENI ny fitaovana ampiasaina ao amin'ny birao fandatsaham-bato, ka taorian'izay vao niroso tamin'ny fandaminana ny mpikambana.
Hatramin'izao ora anoratanay izao, dia mbola betsaka ny olona misava ny kara-pifidianana amin'ireo birao manerana an'i Mahajanga.
Anisan'ny lesoka ihany koa ankoatra ny tsy fahatafidiran'ny ankamaroan'ny mpifidy ao anaty lisitra, mifangaro any amin'ny Fokontany ny karatry ny mpifidy ka mampanano-sarotra ny tompon'andraikitra.